ShweMinThar: တပ်မတော်ရမ်အရက် (Army RUM)
#တပ်မတော်ရမ်အရက် သို့မဟုတ် #ယမကာလုလင်တို့နှစ်ခြိုက်နေသောအာမီ
လွန်ခဲ့သောသုံးလေးလလောက်က ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ရုပ်သံတစ်ခုက မြန်မာ့တပ်မတော်အကြောင်း documentary တစ်ပုဒ်လာရောက်ရိုက်ကူးထားတာကို fb မှာလူသိများကြပါတယ်။ အဲဒီသတင်းရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ရုရှားကြီးက မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေကို ရာရှင်အဖြစ်ပေးတယ့် Army Rum နဲ့ Dagon Beer အကြောင်း အတော်ကြော်ငြာပေးသွားလို့ လူသိများလာခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းက အဲဒီ documentary မရိုက်ခင် နှစ်အတော်ကြာကတည်းက Army Rum က နာမည်ရှိပြီးသားပါ ကြိုက်တတ်သူတွေအဖို့ တစ်ပုလင်းဆို ဆိုသလောက် တန်ဖိုးထားပြီးသောက်ကြပါတယ်။
အာမီရမ် ဆိုတာ ဘယ်လိုအရက်မျိုးလဲ ဘာကြောင့်လူကြိုက်များလဲ သောက်သုံးသူတွေဘက်ကတုန့်ပြန်မှုကဘယ်လိုလဲ ဆိုတာတွေကို ခင်ရာမင်ရာ ယမကာလုလင်များ တပ်မတော်သားများ ဆီမှမေးမြန်းပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါ့မည်။
ဗြိတိသျှစနစ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသေးသော ခေတ်သစ်တပ်မတော်များမှာ ရမ်အရက်ကို ရာရှင်အနေနဲ့ထုတ်ပေးခဲ့သည်။(ဥပမာ အိန္ဒိယ မြန်မာ နယူးဇီလန်) ရမ်အရက်ဆိုတာ ယခင်က သဘောင်္သားများအတွက် နှုတ်မြိန်စာအဖြစ်လည်းကောင်း ဆေးဝါးအဖြစ်လည်းကောင်းသောက်သုံးသောအရက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရေတပ်ကိုဦးစားပေးထားသော ဗြိတိသျှတပ်မတော်တွင် ရမ်အရက်သည် ရိုးရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရင့်ရေတပ်သားတို့ကိုသာမက ကြည်းတပ်သားများအတွက် ထုတ်ပေးသောရိက္ခာအမျိုးအစားထဲတွင် ရမ်ပါသည်။ ၁၆~၁၇ရာစုကတည်းကစကာ ကမ္ဘာပတ်ဓမြတိုက်ပြီး နေမဝင်အင်ပါယာထူထောင်နေသူ ငဗြိတို့အတွက် ၄င်းတို့တပ်မတော်သားများ၏ကျန်းမာရေးသည် ဦးစားပေးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရမ်အရက်အား သင့်တော်သောဆေးဝါးများဖြင့် ပေါင်းစပ်ချက်လုပ်ကာ မျှတသောပမာဏဖြင့် သုံးဆောင်ပါက ကိုယ်ခံအားကောင်းခြင်း ရာသီဥတုနှင့်ရောဂါဘယဒဏ်အား ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း နှင့်အခြားကောင်းကျိုးများရရှိသည်။ ဗြိတိသျှအင်ပါယာကိုထူထောင်စဉ်က ကမ္ဘာ့နေရာအနှံအပြားသို့သွားရောက်ကာ တိုက်ခိုက်သော ဗြိတိသျှလူဖြူ စစ်သားတို့အတွက် တပ်မတော်သုံးရမ်အရက်အား ဗြိတိသျှတပ်မတော်မှထုတ်ပေးသည်။ နောက်ပိုင်း ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွင်းမှ ကိုလိုနီတပ်မတော်များ(မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်များမှလွဲ၍)အတွက် နိုင်ငံအလိုက်သင့်တော်သော ရမ်အရက်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယကဲ့သို့ မုတ်သုန်ရာသီရှိသောနိုင်ငံများအတွက် ငှက်ဖျားနှင့်ဘယ်ရီဘယ်ရီရောဂါ ကာကွယ်ရန် ကွီနိုင်ဆေးရည်ပါသောရမ်အရက်အမျိုးအစားထုတ်ပေးသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးသော်လည်း ဗြိတိသျှတပ်မတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဆက်လက် သုံးစွဲနေသည့်အပြင် လိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်ရမ် အားဆက်လက်ထုတ်ပေးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏အာမီရမ်တွင် ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးကွီနိုင်ဆေးရည်အပြင် အခြားသောဆေးများပါဝင်ပြီး အရက်ပါဝင်နှုန်း ၄၃%ဖြစ်သဖြင့် အာမီရမ်များထဲတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသောရမ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကတည်းက တိုက်ခိုက်နေသော သောင်းကျန်းမှုနှိမ်နင်းရေးတိုက်ပွဲများကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်သားများသည် တောင်ပေါ်မြေပြန့်မရွေး နေရာအနှံ့သွားလာရောက်ရှိနေကြသည်။ ထိုသို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ခင်ရာမင်ကြောင်းမိတ်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်စေ စည်းရုံးရေးအရဖြစ်စေ ဝန်ထမ်းခြင်းမိတ်ဆုံစားသောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ အာမီရမ်အား တပ်မတော်သားများသာမက ဝန်ထမ်း အရပ်သားပြည်သူတို့ပါမြည်းစမ်းမိကြသည်။ ၄င်း၏ ဆေးဖက်ဝင်သော အာနိသင်အရ တောထဲတောင်ထဲနေတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော ဝန်ထမ်းနှင့်ပြည်သူတို့သည် အာမီရမ်၏ကောင်းကွက်အားသိမြင်ကာ နှစ်ခြိုက်စွာသောက်သုံးကြသည်။ မဆလခေတ်တွင် အစစအရာရာရှားပါးသောကာလဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်ပသွင်းကုန်အရက်ကိုကန့်သတ်ထားသဖြင့် သာမန်ပြည်သူတို့အတွက် BEDC၏ ဘီအီးဖြူ နှင့် တပ်မတော်သားတို့အတွက် အာမီရမ်သည်သာ မြန်မာပြည်၏ အကျော်ကရ ယမကာများဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅နောက်ပိုင်းပြည်ပမှ အဖျော်ယာမကာများဝင်လာခြင်း ပြည်တွင်းဖြစ် အဖျော်ယာမကာများထုတ်လုပ်လာခြင်းတို့ဖြင့် ဘီအီးအရက်ဖြူ သည် ပျောက်သွားပြီး တပ်မတော်သားများကြားထဲတွင်ပင် အာမီရမ်သည် ခေတ္တတိမ်ကောသွားခဲ့သည်။ သို့သော် အာမီရမ်၏အရည်အသွေးအား စတင်ထုတ်လုပ်စဉ်မှ ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုသည် ၄င်းကိုသောက်သုံးသူများကို ဆွဲဆောင်နေမြဲဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ယခုလို ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နေသောကာလတွင်ပင် ၁၃ပက်ပါတစ်ပုလင်းလျှင် ကာလပေါက်ဈေး ၁၅၀၀ သာရှိသဖြင့် ယခင်ကဆို ယခုထက်ဈေးပိုချိုမည်မလွဲပေ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အရသာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အရည်အသွေးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အခြားအဖျော်ယာမကာများထက်မလျော့ဘဲ အချို့နေရာတွင် ပိုမိုသာလွန်သဖြင့် ၂၀၀၉~၁၀ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စတင်ကာ သောက်သုံးသူပြန်လည်များလာသည်။
ယခင်က ဦးပိုင်အနေဖြင့် တပ်မတော်အတွက်သာမက ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရန်အတွက် အာမီရမ်အားတပ်မတော်သားများအတွက်သာမက ပြင်ပဈေးကွက်အတွက် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြန့်ဖြူးခဲ့သဖြင့် အာမီရမ်အတုများပေါ်ခဲ့သည်လည်းရှိသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်မှစကာ အာမီရမ်အား ပြင်ပဈေးကွက်တွင် မတွေ့ရတော့ဘဲ တပ်မတော်သားများအတွက်သာ သီးသန့် Army personl only ထုတ်လုပ်လာသည်။ အရေအတွက်ကိုလျော့ချလိုက်သဖြင့် အရည်အသွေးဘက်သို့ပိုမိုအားထည့်နိုင်လာသောအခါ အာမီရမ်၏အရည်အသွေးသည် ယခင်ကထက်ပိုမို တိုးတက်လာသည်။ အထူးသဖြင့် ညကသောက်ထားလျှင် နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် အရက်နာကျခြင်း မအီမသာဖြစ်ခြင်း လုံးဝမရှိသဖြင့် ယာမကာလုလင်တို့အကြိုက်ဖြစ်လာသည်။ Limited edition ဖြစ်လာသဖြင့် တပ်မတော်သားများအတွက်ပင် ရှားပါးကုန်စည်ဖြစ်လာသောအခါ အပြင်ရှိ ယာမကာလုလင်တို့အဖို့မြင်သာမြင်မကြင်ရသည့်ဘဝဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် အရက်အတုများစွာပေါများနေသော ကာလတွင် Army personal only စာတမ်းပါ အရက်ပါဝင်နှုန်း ၄၉%ရှိသည့် ရမ်သည် နှစ်သက်သူတို့အတွက် စစ်မှန်သောရွှေပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွှေဆိုသည့်အတိုင်း မပေါများပေ။ ခင်ရာမင်ရာတပ်မတော်သားများထံမှပင် ရရှိရန်ခက်လှသည်။ တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင်ပင် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင်ဖြစ်စေ နောက်တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်ဖြစ်စေ ရာသီဥတုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဆေးဝါးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖျားနာချင်ဟန်ရှိလာလျှင် တစ်ပက်ခန့်သောက်သုံးပါက အဖျားမဝင်သဖြင့် အရက်မသောက်တတ်သောသူများပင်ဆေးဝါးအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားတတ်ကြသည်။
(ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာရေးသားပါသည်။ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းအား စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင်အားမပေးပေ။ တန်ဆေးလွန်ဘေးစကားပုံအတိုင်း မိမိတို့သင့်တင့်သောပမာဏကိုချင့်ချိန်သောက်သုံးရန် လိုသည်။ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်မှ ခွေးဖြစ်နွားဖြစ်အဆင့်မရောက်ခင် အသိ သတိဖြင့် ထိန်းသိမ်းကြပါ)
#အာမီဆားငံ သို့မဟုတ် ပြု ပြင်ထားသောအာမီရမ်
ယနေ့ online ပေါ်တွင် အချို့တပ်မတော်သားများနှင့် နှစ်သက်သူများကြားထဲတွင် နာမည်ကျော်နေသည်က ပြုပြင်ထားသာ အာမီဆားငံဟူသည့်အမည်ဖြင့် အာမီရမ်ဖြစ်သည်။ လိုက်လံမေးမြန်းထားသမျှအား ပြန်လည်အမျိုးအစားခွဲသော် သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ထိုအမျိုးအစားများမှာ
1. High concentration Brackish Army Rum
2. Low concentration Brackish Army Rum
3. Army rum cocktail တို့ပင်ဖြစ်သည်။
အာမီရမ်သည် အရည်အသွေးအားဖြင့် ယမကာလုလင်တို့ နှစ်သက်သော်လည်း ၄င်း၏ အနံ့နှင့်အရသာသည် ပြင်းထန်လှသည်။ ရိုးရိုးသုံးဆောင်ပါက အဝင်ဆိုးတတ်သဖြင့် ပြုပြင်ကာ သောက်သုံးကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အမျိုးအစားသုံးခုသည် နံပါတ်စဉ်အလိုက်အဆင့်အတန်းကွာခြားသည်။ ပထမနှစ်မျိုးသည် ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်ပြီး အောက်ဆုံးအဆင့်သည် စိတ်မရှည်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။အရသာလဲကွာခြားလှသည်။
ပြုလုပ်နည်းများကို ပြန်လည်ဝေမျှရမည်ဆိုသော် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် cocktail ကိုဦးစွာဆိုရပေမည်။ Army rum cocktail အတွက် လိုအပ်သောအမယ်များသည် လွယ်ကူသည်။ သစ်သီးဖျော်ရည်အနှစ်(ဆားငံသီးဖျော်ရည်အနှစ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်) သံပုရာသီး နှင့် ရေသာဖြစ်သည်။ ငါးကြင်းဖန်ခွက်အရွယ် ကော့တေးတစ်ခွက်အတွက် Army rum ၂ပက် သစ်သီးဖျော်ရည်နှစ် ၁ပက် သံပုရာသီးတစ်စိတ် အားထည့်ကာ ရေအပြည့်ဖြည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါက လွယ်ကူသော အာမီကော့တေးတစ်ခွက်ဖြစ်သည်။ ဆားငံသီးအနှစ်မရမက သံပုရာရည် နာနတ်ရည်သုံးနိုင်သည်။ အရသာအားဖြင့် အဝင်အနည်းငယ်သက်သာစေပြီး ဆားငံသီး၏ အငန်အရသာ သံပုရာသီး၏ လတ်ဆတ်မှုတို့အားအပြည့်အဝခံစားရပြီး ညစာမသုံးဆောင်မီသောက်သုံးပါက နှုတ်ကိုမြိန်စေသည်။
ဒုတိယတန်းစား အာမီဆားငံဖြစ်သော Low conentration အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများသည် ဆားငံသီးဘူးကြီး နှစ်ဘူး ဆားချိုသီး ဘူးသေး လေးဘူး သကြား ငါးကျပ်သား နှင့် ရေ ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ အာမီရမ် အသစ်တစ်ပုလင်းအား နှစ်ပုလင်းခွဲကာ ထည့်ရမည်။ (မထည့်ချင်လို့ တစ်ဝက်သောက်ပစ်လဲအပြစ်မဆို ဟဲဟဲ) အာမီရမ်ပုလင်းတစ်ဝက်စီအား ဆားငံတစ်ဘူး ဆားချိုဘူးသေးနှစ်ဘူးစီထည့်ကာ သကြား ငါးကျပ်သားထည့် ရေအားပုလင်းအပြည့် ဖြည့်ကာ သကြားများပျော်သည့်အထိ လှုပ်ရမည်။ သကြားများအားလုံးပျော်ဝင်သွားပြီဆိုပါက အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ကာ အလင်းရောင်မရှိသော နေရာတွင် နှစ်ပတ်ထားရမည်။ နှစ်ပတ်စေ့သောအခါ ထိုပုလင်းအားဖွင့်ကာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ ဆားငံသီးဆားချိုသီး၏ မွေးပျံ့သောရနံ့နှင့် ချိုမြသောအရသာသည် မိတ်ဆွေတို့လျှာဖျားတွင်စွဲစေပြီး ဝမ်းမီးကောင်းစေပါသည်။ စတင်စိမ်စဉ်ကတည်းက ရေပါပါဝင်ရောစပ်ထားသဖြင့် ရေထပ်မံရော စရာမလိုဘဲ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သကြားထည့်ထားသဖြင့် Alcohal % အား ၄၅~၄၇%ခန့်အထိမြင့်ထားသဖြင့် တစ်ခေါက်တည်းများစွာမသောက်ရန် သတိပေးပါသည်။(မှတ်ချက် ဤအာမီရမ်အမျိုးအစားအား ရေရောခြင်း အခြားသော အဖျော်ယမကာများရောခြင်း မပြုရန်သတိပြုပါ)
ပထမတန်းစားအာမီဆားငံဖြစ်သော High concentration အတွက်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများမှာ ဆားငံသီးဘူးကြီးတစ်ဘူး ဆားချိုသီးတစ်ဘူး သကြား ငါးကျပ်သားမှလိုအပ်သလောက် ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်မြစ်များ (တောရှောက်မြစ် မချစ်ဥ ရှီးပဒီး ဂျင်ဆင်း ကဲ့သို့သောဆေးများ) ပင်ဖြစ်သည်။ (ဆေးဘက်ဝင်သစ်ဥသစ်မြစ်များမထည့်လည်း ကိစ္စမရှိပါ ကြိုက်တတ်လျှင်ဖြစ်စေ လိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ ထည့်နိုင်သည်ဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။) ပထမဦးစွာ အာမီရမ်တစ်ပုလင်းလျှင် ၁၃ပက်ပါဝင်သဖြင့် ၄ပက်အား ထုတ်ပစ်ရမည်။ ဤနည်းတွင်မူရင်းပုလင်းဖြင့်သာစိမ်ဖို့လိုပါသည်။ ၄ပက်ထုတ်ပစ်သောပုလင်းထဲသို့ ဆားငံနှင့်ဆားချိုသီးများ ထည့်ရမည်။ ဆေးမြစ်များထည့်မည်ဆိုပါက အတုံးသေးများဖြစ်အောင် တုံးကာထည့်ရမည်။ အမယ်များစုံလင်အောင်ထည့်ပြီးပါက သကြားထည့်ရမည်။ သကြားထည့်ရတွင် ပုလင်းအဝမရောက်ခင် လက်တစ်လုံးအလိုအထိဖြည့်ရမည်။(မေးမြန်းချက်များသော်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်စိမ်စဉ်က အတွေ့အကြုံများအရသော်လည်းကောင်း သကြား ငါးကျပ်သားမှ တစ်ဆယ်သားအထိလိုအပ်သည်) ပါဝင်ပစ္စည်းများအကုန်စုံပါက ပုလင်းအားလေလုံအောင်ပိတ်ကာ သကြားများပျော်သည်အထိ လှုပ်ခါပေးရမည်။ သကြားများပျော်သည်ဆိုမှ မှောင်ကာခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင် နှစ်လထားရသည်။ နှစ်လပြည့်သော်စတင်သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း သက်တမ်းကြာကြာစိမ်လေ အရသာပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ခြောက်လကြာစိမ်ထားသော ပထမတန်းစားအာမီဆားငံတစ်ပုလင်းသည် ယမကာလုလင်တို့အတွက် Black တစ်လုံးနှင့်ပင်မလဲနိုင်ဟုဆိုကြသည်။ ALC ၅၀%နှင့်အထက် ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ အာမီဆားငံများ နှင့်တွဲဖက်သုံးဆောင်သင့်သော ပထမတန်းစားအမြည်းသည် အသားကင်များဖြစ်သည်။ ဒုတိယတန်းစားမှာ ကျပ်တိုက်ခြောက် အသားခြောက်များဖြစ်သည်။ တတိယတန်းစားသည် ချိုသောအရသာရှိသည့်အသီးအရွက်ကြော်များဖြစ်သည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု မရမ်းပြားတစ်ထုပ်ဖြင့် မြည်းသူများလည်းတွေ့ဖူးသည် လက်ဖက်ချဉ်စပ်တစ်ထုပ်နှင့်မြည်းသူလဲတွေ့ဖူးသဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ဖြင့်တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ အမျိုးအစားများသည် ဇိမ်ခံသောက်သုံးရန်ဦးစားပေးထားသော အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအရ သောက်သုံးသောအမျိုးအစားများကျန်ပါသေးသည်။ အချို့က ဆေးမှုန့်များဖြင့် ရောစပ်သောက်သုံးခြင်း(မြဟသာင်္ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းအကြောအားတိုးဆေးများထည့်ခြင်း) မုဆိုးအကိုများဆီမှရသော သတင်းအရ မြွေသွေးထည့်သောက်ခြင်းတို့ရှိသည်။ ထို့ပြင် သဘာဝအရသာကိုလိုချင်သူများအတွက်လည်း နောက်ထပ်နည်းတစ်ခုထပ်မံedit လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။
အဆိုပါနည်းမှာ သစ်သီးစိမ်အရက်ပင်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ အာမီတစ်လုံးနှင့်အထက် လေးညှင်း ၆ပွင့် ပန်းသီး နာနတ်သီး နှင့် မက်မန်း သို့မဟုတ် ပျားလိမ္မော် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ပျားရည်အနည်းငယ်လိုသည်။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ သစ်သီးများအား ခွဲစိတ်ကာအတုံးများအခြမ်းများပြုလုပ်ပြီး လေးညှင်းမှုန့်(လေးညှင်းခြောက်ပွင့်အားအမှုန့်ကြိတ်ထားခြင်း)ပျားရည်တို့ဖြင့်နယ်ကာ ၁၅မိနစ်ခန့်နှပ်ထားရမည်။ ဤနည်းအတွက်စိမ်မည်ဆိုပါက အာမီသုံးလုံးခန့်ဆန့်သော ဖန်ပုလင်းကြီးသို့မဟုတ် ဖန်ဘူးကြီး တစ်လုံးလိုသည်။ ကြွေထည်ဖြင့်ဆိုပိုကောင်းသည်။ပလတ်စတစ်မသုံးရ။ နှပ်ထားသောသစ်သီးများအား ဖန်ပုလင်းထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက် အာမီနှစ်လုံး လောင်းထည့်ပါ။ ဖန်ပုလင်းကြီး ပြည့်သည်အထိရေရောပါ။ အဖုံးအားလေလုံအောင်ပိတ်ပြီး မှောင်သောနေရာတွင် တစ်လခန့်စိမ်ပါက အနံ့ပြင်းထန်သော အာမီ၏အနံ့အားလုံးပျက်ပြယ်သွားကာ ချိုမွှေးသောသစ်သီးစိမ်သဘာဝရမ်အရက်ရရှိပါသည်။ အာမီရမ်အရသာအတိုင်း ပူရှိန်းခြင်းတွင် အေးမြသောသစ်သီးအရသာစွက်ပြီး သောက်ချိန်တွင် လေးညှင်းပျားရည်နံ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ညနေထမင်းမစားမှီတစ်ပက်ခန့်နေ့စဉ် သောက်သုံးပါက အသက်အရွယ်ကြီးသူ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့ အကြောအခြင်ပြေလျော့ကာ သွေးလေလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပါသည်။ငယ်ရွယ်သူယောကျာ်းလေးများအတွက်ဆိုလျှင် အရက်ပိုထည့်ပြီးရေလျော့ကာ သကြားတစ်ဆယ်သားထပ်ထည့်ရမည်။
အသိ သတိဖြင့်ယှဉ်ကာ သပ္ပမျှတအောင်သုံးဆောင်ပြီး သက်ရှည်ကျန်းမာစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းဖြင့်
စစ်မှတ်တမ်း page မှတင်ဆက်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 5:48 AM